LABSA WARAANA BILISUMMAA OROMOO, Ebla 1, 2019 – Kichuu
Akeekaa fi Kaayyoon Waraanni Bilisummaa Oromoo ijaarameef ifaa dha. Innis Bilisummaa fi Walabummaa Saba Oromoo kan boortaan sarbame boortaan deebisuudhan Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan Addi Bilisummaa Oromoo qabsaawuuf galmaan gahuu dha. Addi Bilisummaa Oromoo tarsiimoo qabsoo hidhannoo akka filmaata duraatti qabatee qabsootti hin seenne. Siyaasa Itoophiyaa keessatti balballi qabsoo karaa nagaa cufaa tahuu irraa daandii qabsoo hidhannoo filate. Akkasis tahee carraa argame hundumaan Kaayyoo qabsoo kanaa karaa nagaatiin galmaan gahuuf Imaammata ifaa fi balbala banaa qabaachaa yoona gahe.
Murtii keenya kanaan qabsoo itti fufuuf akka gargaaruufis qaama AJAJA WARAANAA OL’AANAA WBO (AWO – WBO) jedhamu hundeessuu keenya labsii kanaan ifa goona.
Qaamni kun (AJAJNI WARAANAA OL’AANAAN WBO) Hoogganoota ABO kanneen hubannoo fi ejjennoo WBO kanatti amananii WBO waliin dhaabbatanii fi ajajootii WBO Zooniilee fi Godinoota garaa garaa (Kibba, Dhiha, Baha, Giddu-Galeessa, Kibba-Bahaa fi Kaaba Oromiyaa) kanneen humni isaan hoogganan sadarkaa Cibiraa gahe of keessaa qaba. Fuul-duraafis ulaagaa kanaan ofitti dabalaa deema. Isaanuma keessaa geggeessitootni qaamichaa (Dursaa fi Itti Aanaan) filaman.
“Baahirdaar fi Maqalee keessatti Qawwee qabatanii hiriira bahuun erga ayyamamee; Wallaggaa fi Gujii keessa deemanii Qawwee hiikkachiisuun maaliif barbaachise?” Obbo #Dajanee_Xaafaa hogganoota olaanaa KFO
Jara kana wanni Dubbatanillee jalaa badeera.
Obsessed Guy is Creeping me out
Has anyone else dealt with someone becoming obsessed with you, even when you haven’t even responded to them?